トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ DC ikhadi Jizile (Jizairu) [esijikelezayo amatyala-kuphela]
inqununu ethe ngqo indlela. Ekusetyenzisweni, we-15 nyanga nganye njengoko komhla wokuvala, Kuyimfuneko ukuba abuyisele kwinyanga elandelayo iintsuku ezili-10. Okokuqala buyiselo Kukho isici umdla ukhululekile. Umzekelo, ukuba ukuthenga 30,000 yen ngoFebruwari, njengoko 5000 yen of mali esiyintlawulo ngoMatshi 10, lixesha intlawulo ye okwesihlandlo sokuqala, Eyokuba kwinqununu, intsalela emva kokuba intlawulo yenziwe ku 25,000 yen kuwe.
uthatha Aprili 51 ezayo yen ukusuka kwiintsuku ezili-10 inzala, Meyi ngu 308 yen, ngoJuni ukuba uhlawule isixa Kongezelelwa umdla 5000 yen ka 235 yen. Umhla intlawulo yokugqibela September 10, uya kuhlawula yen umdla 53. Wekhadi yamkelwe nangaliphi na ixesha. Ukuba abuyise yen 10,000 ukuya kumhla intlawulo ngaphambi kokuba lokuqala kulo mzekelo, intsalela iya kuba 20,000 yen lwabelwe ngqo kwinqununu. In
umdla kwakhona ukuya elandelayo Matshi 10 ezamahala, 5000 yen sabiwa kwinqununu, intsalela iya kuba 15,000 yen. Oko ke ngoko zongezwe nangaliphi na ixesha lokuhlawula, ukuba intlawulo yokuqala, usike umdla mali. million 1 yen kwimali
DC ikhadi Jizile i credit olujikelezayo kuphela ikhadi lamatyala zeqela Mitsubishi UFJ likhuphe. Intlawulo yonyaka kukuba simahla, na uhlobo intlawulo simahla kwekhadi. intlawulo yenyanga ngoku kunye umdla intlawulo ubuncinane ukuya 5000 yen, intlawulo eyongezelelweyo iye kunokwenzeka nangaliphi na ixesha xa kukho intshiyekela.
Ngokuzenzekelayo oku kuzakucwangcisa 5,000 yen ngexesha kolwamkelo, kodwa zingacwangciswa kwi 10,000 yen evela yen 10,000 kwiinkonzo Web kunye ngomnxeba yen 50,000 emva kokwamkelwa kwabafundi. Isicelo sele eneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu, ngaphandle kwabafundi bezikolo zamabanga aphakamileyo, abantwana bajoyine ngaphezulu kwemvume yabazali. ikhadi Family, ezifana iqabane okanye abantwana ebomini efanayo nayo kukhutshwa, nto leyo nayo umrhumo wonyaka wobulungu ukhululekile. Large Meri of
DC ikhadi Jizile emnyango tsu sise kwindawo indawo yongezwe phezulu. card Normal letyala, kodwa enye ingongoma yen 4 yen 5 ehambelana ukusebenzisa 1000 yen sisibini esithathwini, unalo-point ezintathu nganye 1000 yen ifumaneka DC ikhadi Jizile, kuba linye iphu- kulingana nama-5 yen, rate zokunciphisa kwelinqaku 1.5 ekhulwini.
Lo ngumphakamo liphezulu kushishino, loo nto nomdla kakhulu. Iingongoma afunyenwe khadi, unako kufakwe inkonzo point-18 yentsebenziswano, ezifana iikhilomitha net okanye Jal miles, ungakwazi ukuthatha ithuba uluhlu olubanzi.
kukho iinkonzo inshorensi ingozi umdla phesheya iinkonzo ezincedisayo, iya mababuyekezwe ukuya kutsho yen million 10 kukwenzakala ngexesha hambo. DC umonakalo ukuvala iintsuku ezingama-90 ukususela kuthengwe iimpahla ezithengiweyo kwikhadi Jizile, ukuze kubuyekezelwe ukuya umda unyaka million 1 yen. Iinkonzo kwimemori esisikhupheli sokuxhaphakileyo nawo zobu- 100,000 yen.
olujikelezayo ngetyala ukuba umntu lowo ukulungele ukuba ikhadi kunye wokuqala nabantu ixesha abo bayathandabuza kuloo nto kufuneka ukuba uhlawule inzala. Kuba uhlobo intlawulo simahla, nangaliphi na ixesha kwenziwa njalo kwi-ATM, ungenza ngokulula usike umdla. Sijonge phambili eninzi amakhadi ukuze yande iingongoma kwintlawulo ikhadi. Large Kukho isicwangciso ezivenkileni, kukuba ikhadi ukuba kunjalo linokudlulisela abantu zithathwa ukuba ibe ngcono ukuze abonise ukuba usebenzisa ikhadi elingathathwanga. Kuya kuba-5%.
olujikelezayo ngetyala ukuba umntu lowo ukulungele ukuba ikhadi kunye wokuqala nabantu ixesha abo bayathandabuza kuloo nto kufuneka ukuba uhlawule inzala. Kuba uhlobo intlawulo simahla, nangaliphi na ixesha kwenziwa njalo kwi-ATM, ungenza ngokulula usike umdla. Sijonge phambili eninzi amakhadi ukuze yande iingongoma kwintlawulo ikhadi. Large Kukho isicwangciso ezivenkileni, kukuba ikhadi ukuba kunjalo linokudlulisela abantu zithathwa ukuba ibe ngcono ukuze abonise ukuba usebenzisa ikhadi elingathathwanga.